के कृष्णले द्रोपदीलाई लाजबाट बचायो? - PAMPEREDPEOPLENY.COM - योग-आध्यात्मिकता
के कृष्णले द्रोपदीलाई लाजबाट बचायो?
घर योग आध्यात्मिकता विश्वास रहस्यवाद विश्वास रहस्यवाद oi-Sanchita द्वारा संचिता चौधरी | प्रकाशित: मंगलबार, सेप्टेम्बर २,, २०१,, २:0:०२ [IST]
तपाईसँग शीर्षक पढे पछि स्तब्ध हुनुपर्ने हर कारण छ। महाभारतमा द्रौपदीलाई अपमान गरेको लाजमर्दो घटनाको बारेमा हामी सबैलाई थाहा छ। द्रौपदीको श्रीमान्, युधिष्ठिरले उनका बुवा-भाईलाई पासाको खेलमा हराए, उनीहरूले आफ्नो बुहूलाई बदनाम गर्ने तुच्छ व्यवहार गर्ने निर्णय गरे।
द्रौपदीका सबै बहादुर पतिहरू बसिए र उनी सबै अदालतको अगाडि बदनाम भइन्। यो विश्वास गरिन्छ कि यो समय हो जब श्रीकृष्ण उनको उद्धार गर्न आए। उहाँको आशीर्वादले, द्रौपदीको कपडा अनन्त भयो र उनी बिगार्न सकिन्न।
अब प्रश्न उठ्छ कि कृष्ण जो आए र द्रौपदीलाई बचाए कि उनी कोही व्यक्ति थिए जसले उनलाई लाजबाट बचाए? फेला पार्नको लागि पढ्नुहोस्:
के यो धर्म थियो?
हामी सबैमा विश्वास छ कि श्रीकृष्ण द्रौपदीलाई लाजको समयमा बचाउन आएकी थिइन। तर महाभारतमा व्यासको विवरण अनुसार यो सत्य होइन। व्यासा भन्छिन् धर्मले उनलाई लाजबाट बचायो। यद्यपि यहाँ धर्म को छ भन्ने कुरा स्पष्ट छैन। यो धर्म, विदुरा वा युधिष्ठिरका भगवान हुनसक्दछ, जो भगवान धर्मका छोरा थिए। त्यसकारण द्रौपदीलाई कसले बचायो भन्ने कुरा स्पष्ट छैन।
प्रचलित मान्यता अनुसार द्रौपदीले उनको लाजको घडीमा केशव वा भगवान कृष्णलाई बोलाउँछिन्। ऊ उनको उद्धार गर्न आउँछ। दन्त्यकथाहरूमा यस कथाको उल्लेख छ। एक पटक कृष्णले सुदर्शन चक्रले आफ्नो औंलामा चोट पुर्‍याएपछि उनको औंलामा रगत बग्न थाल्यो। यो देखेर द्रौपदीले उनको साडीबाट एउटा टुक्रा च्याते र आफ्नो औंलामा बाँधेर रक्तस्राव रोक्न सके।
द्रौपदीको हावभावबाट प्रभावित श्रीकृष्णले उनलाई आवश्यक परेको समयमा repण चुक्ता गर्ने वाचा गरे। त्यसोभए, उनले द्रौपदीलाई उनको कपडा अन्तहीन बनाएर लाज नमान्नेबाट बचाए।
वजन वजन भारत को लागी स्वस्थ नाश्ता
Durषि दुर्वासा द्रौपदीलाई 'चीर हरन' बाट वा डिस्ट्रॉबबाट बचाउने अर्को रोचक कथा छ। शिव पुराणका अनुसार द्रौपदीको उद्धार Durषि दुर्वासाले उनलाई दिएका वरदानका कारण हुन्। कथाको अनुसार, एक पटक ageषि गंगामा नुहाइरहेका थिए भने ageषिको कम्मरको कपडालाई धारहरूले बोकेर लगे।
त्यसो भए, द्रौपदीले उनको साडीको एउटा टुक्रा च्याते र toषिलाई दिए। Pleasedषि खुशी भए र उनको वरदान दिए। यो वरदानलाई कपडाको अन्त्य नहुने कारणको रूपमा भनिन्छ जब दुशासनले उनीलाई बाहिर निकाल्ने प्रयास गरे।
सूर्य को पेब्याक
उडिया संस्करण सरला महाभारतका अनुसार सूर्य देव र भगवान कृष्णले संयुक्त रुपमा द्रौपदीलाई बचाए। कथा यस्तै हुन्छ। एक पटक जब सूर्यले उनका छोरा, शनिको विवाहको लागि द्रौपदीबाट लुगा लिएका थिए। त्यसबेला उनले द्रौपदीलाई यस्तो वाचा गरेका थिए कि उनी संकटको समयमा उनलाई backण चुकाउनेछन्।
त्यसोभए, जब द्रौपदीलाई बेवास्ता गरिएको थियो, कृष्णले सूर्यलाई उनको aboutणको बारेमा सम्झाउनुभयो। त्यसैले सूर्यले छाया (छाया) र माया (भ्रम) लाई द्रौपदी लगाउन आदेश दियो। अदालतमा सबैले नदेखेका यी दुवैले द्रौपदीलाई लुगा लगाइरहेका थिए जब दुशासनले उनको लुगा तानिरहेकी थिइन्।
तसर्थ यो कुरा ठीकै हो भन्न सकिंदैन कि द्रौपदीलाई लाजबाट बचाउने श्रीकृष्ण मात्र हुनुहुन्थ्यो। यद्यपि उनको रक्षा गर्न उनले ठूलो भूमिका खेले जब अरू कसैले गरेनन।
सेतो नेल पेन्टमा नेल आर्ट
कसरी करी पातहरू बढ्नको लागि
कसरी एउटा साडी टाँस्ने वरमहलक्ष्मीलाई
के म खाली पेटमा केरा खान सक्छु?
के हामीले खाने बेलामा पानी पिउनु पर्छ?
मुल्तानी मिट्टी र बेसन फेस प्याक
दिनहुँ उखुको रस पिउँदा हुने फाइदाहरू